Kit Wifi, Kamera Wifi, Kamera bateria - Aopvision
"Tsena aloha, mpanjifa aloha", mifantoka amin'ny tsena ary mpanjifa fangatahana ho foto-kevitra fitantanana fototra. Niasa mafy izahay nanatsara ny vokatra ary nanatsara ny serivisinay. Niaraka taminao foana izahay.
Nahazo mari-pahaizana momba ny kalitao iraisam-pirenena ISO2008 sy mari-pahaizana momba ny fitantanana tontolo iainana iraisam-pirenena ISO14001; Ankoatr'izay, ny vokatra andian-dahatsoratra dia ankatoavina amin'ny mari-pankasitrahana RoHS, CE ary FCC
1-Panasonic mialoha ny tsipika NPM SMT, haingam-pandeha, miampy Yamaha SMT LINE 2-Set an'ny mari-pana mandeha amin'ny rivotra miendrika rivotra 3-tsipika ekipa 4-vondrona R&D ekipa mpiady 50 olona isam-bolana Qty Capacity: 200K an'ny Cameras, 30K-50K an'ny DVR / NVR
Shenzhen Aopvision Tech Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2006, dia manam-pahaizana manokana amin'ny R&D, famokarana ary ny varotra amin'ny sehatry ny fiarovana. Manolotra ny vokatra CCTV rehetra izahay ho an'ny mpanjifa manerantany, ao anatin'izany ny Smart Face Detection / Face IDH.265 NVR range, Smart IP Camera, Smart 5 IN 1 XVR, HD Cameras matihanina sy avo lenta, WiFi Camera ary WiFi NVR Kit, 4G / Wifi Solar Camera . Amin'ny maha-mpanamboatra azy any Shina, Aopvision dia natokana hanome teknolojia avo lenta, vokatra avo lenta ary serivisy matihanina.